Intengiso & Services - Shanghai Vukile Co., Ltd
Building & eziphathekayo
Nobucukubhede & Storage
Intengiso & Services
400 Service Customer Amaziko
Amaziko inkonzo Customer 400 zahlulwe zibe ngamaziko yonxibelelwano ulwazi, amaziko ukuphucula ulwaneliseko abathengi, amaziko uhlalutyo yokuziphatha umthengi, kunye namaziko nokuthengisa imveliso, ezibonelela ngeenkonzo zobungcali kuquka iinkcukacha kwiziko lenkonzo, uthethwano ixabiso, inkxaso yobugcisa, imveliso izikhalazo, ukulungiswa kunye nemibuzo abaza kuzisebenzisa, kunye nokuthengiswa inkxaso.
Usuku Experience Umsebenzisi
Ngexesha amava lomsebenzisi sithatha ixesha ukwazisa ngokupheleleyo iimveliso ezintsha ze enze practical imisebenzi amava lwabathengi imini, kunokukunceda uqonde XCMG ngcono, kwaye ikunike izisombululo zokwakha zabucala elungelelanisiweyo.
Inkqubo Golden Training Operator
Sifuna ukuba negalelo kuqeqesho lweengcali zoshishino obalaseleyo, ngoko thina ngehlombe ekwakheni umqhubi isiseko uqeqesho, axhase National bokuPhakamisa yoKhuphiswano Skills and uKhuphiswano Design eziphathekayo, yaye ukukhuthaza intsebenziswano kunye neenkampani zokwakha.
Private Elungiselelweyo Construction Solutions
Sinawo izibonelelo software ne-hardware kwakunye iminyaka yamava zokwakha ezifunekayo ukuze ikunike izisombululo kakuhle kwaye kakhulu wena zokwakha. Siya ngovuyo kuphulaphula nayiphi na eyilwe yakho imveliso, imveliso, okanye iingcamango inkonzo ngethuba lothetha-thethwano.
Imfuno zokwakha ngokwahlukeneyo uhlale khona, kwaye kungabikho nkalo angayiveleliyo ekuzameni ekunceda ukuba ukhethe izixhobo ekunene kwaye baqonde ixabiso ngokupheleleyo izixhobo oyithengayo.
Omnye-bayeke Iinkonzo zeMali
Ngokusekelwe ingqondo enzulu iimveliso oomatshini lobunjineli kunye neemfuno zabaxumi, sisebenza kunye namaziko ezinkulu zemali ukuze ishishini lakho kunye nezisombululo engcono ngezimali.
Ukwenzela ukuhlangabezana konke ukuswela kwenu, sibonelela ngenkonzo kweenkonzo zokuhamba zobungcali kunye nenkonzo yoqeqesho ufakelo yokuqala yonke into ngoomatshini.
365 × 24 Inkonzo Unyaka-ngeenxa
Ngokuthe gabalala, sinazo iinjineli inkonzo ngaphezu 5000 kunye nezithuthi 1500 inkonzo yokuzinikela. Sizimisele ukuba unyaka wonke wenkonzo iiyure ezingama-24 nkqu ngexesha leeholide, ngokuhambelana nomgaqo-nkqubo yethu lokusoloko ngokubonelela "impendulo kwisithuba semizuzu eli-15 kunye nokuzaliswa umsebenzi kwisithuba seeyure ezingama-24."
Smart Service Butler
Siye saseka i GPS Global Service Centre ogqibeleleyo, yaye unokukunika inkqubo esisebenzayo wabangcamli smart nge ye Internet Sezinto eqongeni.
Abaza kuzisebenzisa xa ufuna
Sine amawaka abaza kuzisebenzisa amaziko kumazwekazi ngamazwekazi emihlanu stock phantse 1 billion abaziingcali abaza kuzisebenzisa. Thina Ndiyathembisa ukuba abaza kuzisebenzisa ziya kusiwa kwisithuba seeyure ezingama-72.
Emva-market Service Amaxhala-free
Thina ezibophelele ekuboneleleni ngeenkonzo emva-emarikeni, kuquka irente, uvavanyo isithuthi yesibini-ngesandla, urhwebo-in, overhauls, kunye okurisayikilisha. Sihlala unamathele uxanduva lwethu nomnqophiso yokusingatha izinto zakho kangangoko sinako.
Thina i "umthengi-ingcali-mveliso-yokwakha" ndlela-emine intsebenziswano nokutshintshiselana eqongeni, kunye nenkqubo yolawulo isandi kunye nokuphuma emsebenzini.
Hotline iyure 24: 0086-13916689101
Imenyu US umgca!
© 2015 Shanghai Vukile Electronic & Mechanical Equipment Co., Ltd. All Right Reserved